Qatar: Waxaan bilownay olole caafimaad
Hay’adda Bisha Cas ee Qadar (QRCS) ayaa sheegtay in ay soo gaba gabeysay labo olole oo qaliin guud ah oo ay ka wadeen caasimada Soomaaliya ee Muqdisho dhaqaatiirta qaliinka ajaaniibta ah isla markaana bukaanada la dhigay isbitaalka magaalada ee Martini. Muqdisho.
QRCS waxay sheegtay in ay qaabishay 867 bukaan muddo bil gudaheed ah ayna baareen dhakhaatiir takhasus leh. Dhakhaatiirta qalliinku waxay sameeyeen 201 hawlgallo waaweyn iyo kuwa dhexdhexaad ah, oo ay ku jiraan kiisas halis ah oo degdeg ah oo u baahan qalliin degdeg ah.
Shaqadooda waxaa ka mid ahaa qalliinnada guud (sida qanjirka ‘prostatectomy’), hernias, cholecystectomy, furitaanka, goynta, qalliinka ugxan sidaha, iyo kuwo kale.
Guud ahaan, 51% ee qalliinadu waxay ahaayeen kuwo waaweyn, 43% dhexdhexaad ah, iyo 6% xaalad degdeg ah. Waxaa jiray 70 qalliin oo haween ah iyo 131 oo loogu talagalay carruurta iyo ragga, sida laga soo xigtay Ururka Bisha Cas ee Qatar.
Faisal Mohamed Al-Emadi, Agaasimaha Fulinta ee Relief iyo Qeybta Horumarinta Caalamiga ee QRCS, ayaa yiri, ‘Guud ahaan barnaamijka qalliinka waa qayb muhiim ah oo ka mid ah howlaha QRCS ee Soomaaliya. Waxay gacan ka geysan doontaa yareynta saameynta dagaalka iyo aafooyinka dabiiciga ah, iyo sidoo kale soo nooleynta dhaqaalaha maxalliga ah. ”
“Alxamdulilaah, dhammaan bukaanadii way bogsadeen, ka dib markii ay heleen daryeel qalliin oo tayo sare leh in kasta oo kaabayaashu aysan ku filnayn,” ayuu yiri. Al-Emadi.
Weftiga caafimaad waxay ka koobnaayeen afar xubnood: dhakhtar guud oo qalliin ah, dhakhtarka suuxinta, diyaarinta qalliinka ka hor iyo dhakhtarka cudurada cudurada, iyo isku duwaha caafimaadka. Ololahan waxaa ka qeyb qaatay 40 xirfadlayaal caafimaad oo Soomaali ah, oo ay ku jiraan dhakhaatiir qalliin, kalkaaliyayaal caafimaad, khuburo diyaarinta Pre-Op, iyo dhakhaatiirta suuxinta iyo kuwa ku takhasusay shaqada.
Dhammaan xirfadleyda caafimaadka waxay heleen tababar shaqo intii lagu jiray ololaha, si kor loogu qaado awooddooda loona horumariyo xirfadaha cusub ee qalliinka, sida ay sheegtay QRCS.
Ka-faa’iideystayaasha waxaa ka mid ahaa dadka gudaha ku barokacay (IDPs) ee ay saameeyeen dagaalladii iyo masiibooyinkii dabiiciga ahaa (abaaraha, daadadka, iwm.), Iyadoo si gaar ah diiradda loo saaray kooxaha ugu nugul sida waayeelka, haweenka, iyo carruurta ku nool degmooyin badan oo ka tirsan Gobolka Banaadir. Dadkan ayaa ka soo barakacay gobollo kale sida Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe iyo Kismaayo.
Qalliinnada iyo tababarka caafimaadka ka sokow, QRCS waxay ku taageertay martida isbitaalka qalab caafimaad oo loogu talagalay qalliinnada, suuxinta, antibiyootikada, baaritaanka shaybaarka, iyo quudinta bukaanka.
Xafladda xiritaanka waxaa goobjoog ka ahaa Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya, oo bogaadiyay howlaha QRCS ay ka waddo Soomaaliya, isla markaana ku dhiirrigelisay iskaashi dheeri ah oo laga yeesho ololeyaasha noocan oo kale ah.
Liiska buuxa ee saxiixyada ugu waaweyn